Umgquba weegusha ukuya kwiteknoloji ye-Organic
Zininzi iifama zeegusha e-Australia, New Zealand, America, England, France, Canada nakwamanye amazwe amaninzi. Ewe ivelisa umgquba weegusha omninzi. Zizinto ezifanelekileyo zokuvelisa isichumiso semveliso. Ngoba? Umgangatho womgquba weegusha ngowokuqala kwimfuyo. Ukukhethwa kwegusha yeegusha ngamahlumelo, ingca ethambileyo, iintyatyambo kunye namagqabi aluhlaza, angamalungu oxinzelelo enitrogen.
Umgquba weegusha omtsha uqukethe i-0.46% ye-phosphorus kunye ne-0.23% ye-potassium, kodwa umxholo we-nitrogen uku-0.66%. Umxholo wayo we-phosphorus kunye ne-potassium uyafana nomnye umgquba wezilwanyana. Umxholo wezinto eziphilayo ufikelela kwi-30%, ngaphaya komnye umgquba wezilwanyana. Umxholo we-nitrogen ungaphezulu kabini kokuqulathwe kubulongo beenkomo. Ke ngoko, xa kugalelwa umgquba olinganayo weegusha emhlabeni, ukusebenza kwesichumiso kuphezulu kakhulu kunamanye umgquba wezilwanyana. Iziphumo zesichumiso ziyakhawuleza kwaye zilungele ukunxiba okuphezulu, kodwa emvaukubola okubolileyo okanye granulation, kungenjalo kulula ukutshisa izithole.
Iigusha ziyakhazimla, kodwa kunqabile ukusela amanzi, ke umgquba weegusha womile kwaye ulungile. Ubungakanani belindle nalo lincinci kakhulu. Umgquba weegusha, njengesichumiso esishushu, yenye yeemanyolo zezilwanyana phakathi komgquba wehashe nobulongwe benkomo. Umgquba weegusha uneezakha mzimba ezityebileyo. Kulula ukwahlulahlula ibe zizakha mzimba ezifanelekileyo ezinokufunxwa, kodwa ikwanazo nezondlo ekunzima ukubola. Ke ngoko, umgquba weegusha wezichumiso zendalo ngumdibaniso wesichumiso esisebenza ngokukhawuleza nesisebenza kancinci, esilungele iintlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa komhlaba. Umgquba weegusha ngokubio-isichumiso Iibhaktheriya zenza umgquba, kwaye emva kokutshitshiswa kweendiza, iibhaktheriya eziyinkimbinkimbi zebhayoloji zivusa ngokulinganayo, emva koko yi-aerobic, i-anaerobic fermentation ukuze ichume kakuhle.
Umxholo wezinto eziphilayo kwinkunkuma yeegusha yayiyi-24% - 27%, umxholo wenitrogen yayingu-0.7% - 0.8%, umxholo wephosphorus wawungu-0.45% - 0.6%, umxholo wepotassium wawungu-0.3% - 0.6%, umxholo Izinto eziphilayo kwiigusha eziyi-5%, initrogen iqulathe i-1.3% ukuya kwi-1.4%, incinci kakhulu i-phosphorus, i-potassium ityebe kakhulu, ukuya kuthi ga kwi-2.1% ukuya kwi-2.3%.
Inkqubo Yokugquba Komgquba / Inkqubo Yokubila:
1. Xuba umgquba weegusha nentwana yomgubo wengca. Ubungakanani bomgubo wengca buxhomekeke kumxholo wobumanzi begusha. Ukwenza umgquba / ukuvundisa ngokubanzi kufuna ama-45% okufuma.
2. Yongeza i-3 kg yebacteria entsonkothileyo kwitoni enye yezixhobo zomgquba weegusha okanye i-1.5 yeetoni yomgquba weegusha omtsha. Emva kokuthambisa ibhaktiriya kumyinge we-1: 300, unokutshiza ngokulinganayo kwimfumba yezixhobo zomgquba. Yongeza isixa esifanelekileyo sombona, ingqolowa yengqolowa, ingca eyomileyo, njl.
3. Iya kuxhotyiswa ngento elungileyo Umxube wezichumisi ukuvuselela izinto eziphilayo. Ukuxuba kufuneka kufane, kungashiyi ibhloko.
4. Emva kokudibanisa zonke izinto ezingavunyelwanga, ungenza imfumba ye compost yewowrow. Ububanzi beemfumba zi-2.0-3.0 m, ukuphakama kwe-1.5-2.0 m. Ngokumalunga nobude, ngaphezulu kwe-5 m ibhetele. Xa ubushushu bungaphezulu kwama-55 ℃, ungasebenzisaUmgquba ojikajika umatshini ukuyiguqula.
Qaphela: Kukho izinto ezinxulumene nefayile yakho ukwenza umgquba weegusha, njengobushushu, umyinge we-C / N, ixabiso le-pH, ioksijini kunye nokuqinisekiswa, njl.
5. Umgquba uyakunyuka ngeentsuku ezintathu ubushushu, iintsuku ezi-5 zingenabumba, iintsuku ezili-9 zikhululekile, iintsuku ezili-12 zinuka kamnandi, zili-15 ukubola.
a. Ngosuku lwesithathu, ingqumba yobushushu inyuka iye kuma-60 ukuya kuma-80 ℃, ibulale i-E. Coli, amaqanda nezinye izifo zezityalo kunye nezinambuzane ezitshabalalisayo.
b. Ngosuku lwesihlanu, ivumba lomgquba weegusha liyasuswa.
c. Ngomhla wethoba, umgquba uba lukhulu kwaye womile, ugqunywe ziihypha ezimhlophe.
d. Ngomhla weshumi elinesibini, ivelisa incasa yewayini;
e. Ngosuku lweshumi elinesihlanu, umgquba weegusha uyakhula.
Xa usenza umgquba wobola weegusha, ungawuthengisa okanye uwugalele egadini yakho, efama, kwigadi yeziqhamo, njalo-njalo. Ukuba ufuna ukwenza igrisi yezichumiso eziphilayo okanye amasuntswana, umgquba kufuneka ube imveliso enzulu yezichumisi.
Imveliso yegusha ngomgquba weGranicle Production
Emva kokufaka umgquba, isichumiso semveliso yezinto eziphilayo sithunyelwa kwi isityumzi izinto semi-emanzi ukutyumza. Kwaye emva koko yongeza ezinye izinto kumgquba (i-nitrogen emsulwa, i-phosphorus pentoxide, i-potassium chloride, i-ammonium chloride, njl. Njl.) Ukuhlangabezana nemigangatho yezondlo efunekayo, emva koko udibanise izinto. Sebenzisauhlobo olutsha lwegranulator yesichumiso sendalo granulate izinto zibe amasuntswana. Yoma kwaye upholise amasuntswana. Sebenzisaumatshini wescreener ukwenza iigranuen eziqhelekileyo nezingafanelekanga. Iimveliso ezifanelekileyo zingapakishwa ngokuthe ngqoumatshini ukupakisha oluzenzekelayo kunye negranules engafanelekanga iya kubuyiselwa kwi-crusher ukuze iphinde yenziwe granulation.
Inkqubo yemveliso yezichumiso yemveliso yezichumiso ingahlulwahlulwa ibe ngumgquba- ityumza- ixubeka- ingqolowa- yokomisa- ukupholisa- ukujonga- ukupakisha.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemveliso yemveliso yezichumisi (ukusuka kwincinci ukuya kwinqanaba elikhulu) ngokhetho lwakho.
Isicelo seGquba lomgquba weegusha
1. Iigusha zomgquba wokubola kwesichumiso iyacotha, ke ilungele isichumiso esisezantsi. Inokonyusa iziphumo zezivuno. Kungangcono ngokudityaniswa kwesichumiso esishushu. Ifakwe kumhlaba oyisanti kunye nokuncamathela kakhulu, inokufikelela kuphuculo lokuchuma, kodwa ikwaphucule nomsebenzi we-enzyme yomhlaba.
2. Isichumiso se-organic sinezakha-mzimba ezahluka-hlukeneyo ezifunekayo ukuphucula umgangatho weemveliso zezolimo, ukugcina iimfuno zesondlo.
3. Isichumiso sendalo siyinzuzo kwimetabolism yomhlaba, siphucula umsebenzi webhayoloji womhlaba, ulwakhiwo kunye nezakhamzimba.
4. Yandisa ukuxhathisa kwembalela yezityalo, ukumelana nengqele, ukutyiwa kwetyuwa kunye nokuchaswa kwetyuwa kunye nokumelana nezifo.